သုံးစွဲသူများကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်း။ စာရင်းအင်း၊ နည်းဗျူဟာများနှင့်တွက်ချက်မှုများ (CRR vs DRR) | Martech Zone
ကျနော်တို့ဝယ်ယူမှုအကြောင်းကိုအတော်လေးမျှဝေပေမယ့်အကြောင်းကိုမလုံလောကျ ဖောက်သည် retention။ ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများသည် ဦး ဆောင်မှုကိုပိုမိုမောင်းနှင်ခြင်းကဲ့သို့မရိုးရှင်းပါ။ ဖောက်သည်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အသစ်များဝယ်ယူရန်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။ ထို့အပြင်လူတစ် ဦး ချင်းရောင်းဝယ်ရေးအစည်းအဝေးများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများသည်ကုမ္ပဏီအများစုတွင်ဝယ်ယူရေးမဟာဗျူဟာများကိုအကြီးအကျယ်ဟန့်တားထားသည်။ ကျနော်တို့က virtual အစည်းအဝေးများနှင့်ဖြစ်ရပ်များမှလှည့်နေစဉ်, များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ရောင်းအားအသစ်မောင်းဖို့စွမ်းရည်အေးခဲခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်သို့မဟုတ်လက်ရှိဖောက်သည်များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းပင်လျှင် ၀ င်ငွေများဆက်လက်တည်မြဲရန်နှင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီများအပေါ်တွင်သာလွှမ်းမိုးရန်အရေးကြီးသည်။
၀ ယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများလျော့နည်းသွားပါကဖွံ့ဖြိုးမှုမြင့်မားသောအဖွဲ့အစည်းများမှခေါင်းဆောင်များသည်ဖောက်သည်များထံမှပိုမိုနီးကပ်စွာအာရုံစိုက်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ ငါ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းသည်ဟုပြောရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဖောက်သည်များထံမှရယူထားသည့်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဗျူဟာများကိုအားဖြည့်ပေးရန်နှင့်ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ရန်နာကျင်စွာသိသာထင်ရှားသည့်သင်ခန်းစာဖြစ်လာသည်။
ဖောက်သည် retention စာရင်း
၏ 67% ပြန်လာဖောက်သည်ပိုပြီးဖြုန်းနေကြတယ် သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးခြောက်လထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှဝယ်ယူသူတို့ရဲ့တတိယနှစ်တွင်။
သင်၏ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကို ၅% တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီများကလုပ်နိုင်သည် အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့် 25 မှ 95% အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ကုမ္ပဏီ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူတယ် ဖောက်သည် retention ကိုဖောက်သည်ဝယ်ယူထက်လျော့နည်းကုန်ကျသည်.
ဖောက်သည်များ၏ ၆၈% သည်aမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ သူတို့နှင့်အတူ။
ဖောက်သည်များ၏ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့သစ္စာရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလုံလောက်စွာမလုပ်နိုင်ဟုခံစားရသည် ဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုဆုချ.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမေရိကန်ဖောက်သည် ၆၂% သည်မတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့ပြောင်းလာခဲ့သည် ဆင်းရဲတဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ.
ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း (ဖောက်သည်နှင့်ဒေါ်လာ) တွက်ချက်မှု
သုံးစွဲသူ၏ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း (CRR) - အချိန်ကာလအစတွင်သင်၌ရှိခဲ့သည့်အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ထိန်းသိမ်းထားသောဖောက်သည်များ၏ရာခိုင်နှုန်း (အသစ်သောသုံးစွဲသူများကိုမရေတွက်ပါ) ။
ဒေါ်လာထိန်းသိမ်းရေးနှုန်း (DRR) - အချိန်ကာလအစတွင်သင်ရရှိခဲ့သည့်ဝင်ေငွနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ရရှိသောဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်း (ဝင်ငွေအသစ်ကိုမရေတွက်ပါ) ။ ၎င်းကိုတွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းမှာသင်၏ဖောက်သည်များကိုဝင်ငွေအတိုင်းအတာဖြင့်အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတစ်ခုချင်းစီအတွက် CRR တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အလွန်အမြတ်အစွန်းများသောကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်ရှိနိုင်သည် အနိမ့်ဖောက်သည် retention ဒါပေမဲ့ မြင့်မားသောဒေါ်လာစျေး retention ကို သူတို့ကသေးငယ်ကန်ထရိုက်ကနေပိုကြီးတဲ့စာချုပ်များပြောင်းအဖြစ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်ငယ်များဆုံးရှုံးသော်လည်းကုမ္ပဏီသည် ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။
ဖောက်သည် retention ကိုမှ Ultimate လမ်းညွှန်
ဒီကနေ infographic Hold တွင် M2 ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုစာရင်းကိုကုမ္ပဏီများမှဖောက်သည်များအဘယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးရကြောင်း၊ ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကိုမည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။CRRဒေါ်လာစျေးထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲ (ဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးသင်၏ဖောက်သည်များကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းများအသေးစိတ်။
အံ့သြဖွယ်များ - ၀ ယ်ယူသူများကိုမမျှော်လင့်သောလက်ဆောင်များသို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ရေးထားသောစာဖြင့်ပင်အံ့အားသင့်စေသည်။
မျှော်လင့်ချက်များ - စိတ်ပျက်နေသောဖောက်သည်များသည်လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များချမှတ်ခြင်းမှလာလေ့ရှိသည်။
စိတ်ကျေနပ်မှု - သင်၏ဖောက်သည်များမည်မျှကျေနပ်သည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည့်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
တုံ့ပြန်ချက် - သင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်ကိုအကြံဥာဏ်တောင်းပါ။
ဆက်သွယ်ပြောဆို - သင်၏တိုးတက်မှုများနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဖောက်သည်များယူဆောင်လာသည့်တန်ဖိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျေနပ်လောက်သောဖောက်သည်များသည်သူတို့၏သစ္စာရှိမှုကိုရရှိရန်မလုံလောက်ပါ။ ယင်းအစားသူတို့သည်ထပ်ခါထပ်ခါစီးပွားရေးနှင့်လွှဲပြောင်းမှုကိုခံထိုက်သောထူးခြားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားရမည်။ ဒီဖောက်သည်တော်လှန်ရေးမောင်းသောအချက်များကိုနားလည်ပါ။
Rick Tate, ၏စာရေးဆရာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှင့်ကွဲပြားသောဖောက်သည်များကိုဖန်တီးခြင်း
ထုတ်ဖော် - Rick Tate ၏စာအုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ Amazon ချိတ်ဆက် link ကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: ရက်ရာဇာဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုဖောက်သည် retentionဖောက်သည် retention ကိုမှုနှုန်းဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဧည့်ဝန်ဆောင်မှုဒေါ်လာ retention ကိုမှုနှုန်းDrrကိုင်အပေါ် m2လက်ရှိထားခြင်းလူမှုမီဒီယာဝယ်ယူဖောက်သည်များအဘယ်ကြောင့်ထွက်ခွာကြရသည်
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2013 ခုနှစ် 12:52 နာရီ
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2013 ခုနှစ် 10:56 နာရီ
အင်း အလို။ 🙂
5:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 31
ကြည်လင်ပြတ်သား! ဖောက်သည်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးသည် လုပ်ငန်းနှင့် ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။